ဒူးနာတဲ့ သူတွေကို ကိုယ်ခြင်းစာ လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ …. – Let Pan Daily
ဒူးနာတဲ့ သူတွေကို ကိုယ်ခြင်းစာ လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ ….
စာရေးဆရာမ လှိုင်း(တောင်ကြီး)ရဲ့ လက်တွေ့ ဒူးနာပျောက် ဆေးနည်းတစ်ခုပါ။
ပြောပြမယ် နော် လက်တွေ့ သက်သာခဲ့တာမို့ ဒူးနာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ် …ကျမညာဖက်ဒူးကတစ်စစ်စစ်နဲ့ကိုက်ကိုက်ပြီးနာနေတာ တော်တော်ကြာပေါ့ နာလာရင်အော်နေရတယ်….
ဆေးမျိုးစုံလိမ်းကြည့်တာ ပူပြီးနံတယ် …ခဏသက်သာတယ် ပြန်ဖြစ်ရော …ဒါနဲ့ ခြေဖနောင့်နာတုန်းကလုပ်ဖူးတဲ့ ဆေးနည်းအတိုင်း လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး ပြန်လုပ်ကြည့်တာ ခုတော့ပျောက်သွားလို့ ရန်ကုန်မှာချော်လဲလို့ရတဲ့ ဒဏ်ရာနာနေတာကြောင့်ခုပြန်လုပ်ထားပါတယ်….
ခြေသလုံးပုံပါနေလို့ကန်တော့ပါရှင်….ရှားစောင်း လက်ပတ် လက်တစ်ဝါးစာကို ဆူးတွေ လှီးထုတ်ပြီး အပြားလိုက်နှစ်ခြမ်းခြမ်း လိုက်ပါ ….ပြီးရင်မီးနွေးနွေးလေးကင်ပါ အပူခံနိုင်သလောက်ကင်ပြီးရင် ဒူးခေါင်းပေါ်မှာဖြေးဖြေးခြင်းတင်ပါ …..
ပြီးရင်ရှားစောင်းလက်ပတ်ပြုတ်ကျမှာစိုးလို့ ပုံပါအတိုင်း ကြွပ်ကြွပ်အိပ် ကိုအနေတော် ညှပ်ပြီ အပြင်မှာပြန်ကပ်ထားပါ ….ပြီးရင် ကြွပ်ကြွပ်ကြိုးနဲ့မလျှော့မတင်းစီးပြီးထားပါ သွားစရာမရှိရင်တော့ နေလည်လဲလုပ်ထားလို့ရပါတယ် …..
ညအိပ်ရာဝင်လုပ်ထားရင် ပိုကောင်းတယ် တစ်ညလုံး စည်းပြီးအိပ်လိုက် မနက်ကျတော့ ပြန်ဖြေ နောက်ရက်ညအိပ်ရာဝင်တစ်ခါထပ်လုပ် အနာပေါ်မူတည်ပြီးပျောက်ပါမယ် …..ကျမတော့ ၃ ရက်ဆက်လုပ်တာနဲ့ခုပျောက်သွားပြီ …..
ခုတော့ချော်လဲထားတဲ့ ဘယ်ဖက်ဒူးကဒဏ်ကို ပြန်လုပ်ထားတာပါ ….ခြေဖနောင့် နာရင်လဲ ဒီအတိုင်းပဲလုပ် ခုထိပြန်မနာတော့ပါဘူး….. ဒူးနာတဲ့သူတွေကို ကိုယ်ခြင်းစာလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ ….လုပ်ကြည့်ကြပါနော်…..
ဒူးနာတဲ့ သူတှကေို ကိုယျခွငျးစာ လို့ တငျပေးလိုကျတာပါ ….
စာရေးဆရာမ လှိုငျး(တောငျကွီး)ရဲ့ လကျတှေ့ ဒူးနာပြောကျ ဆေးနညျး တဈခုပါ။
ပွောပွမယျ နျော လကျတှေ့ သကျသာခဲ့တာမို့ ဒူးနာနတေဲ့မိတျဆှတှေေ လုပျကွညျ့စခေငျြပါတယျ …ကမြညာဖကျဒူးကတဈစဈစဈနဲ့ကိုကျကိုကျပွီးနာနတော တျောတျောကွာပေါ့ နာလာရငျအျောနရေတယျ…. ဆေးမြိုးစုံ လိမျးကွညျ့တာ ပူပွီးနံတယျ …ခဏသကျသာတယျ ပွနျဖွဈရော …ဒါနဲ့ ခွဖေနောငျ့နာတုနျးကလုပျဖူးတဲ့ ဆေးနညျးအတိုငျး လုပျကွညျ့မယျဆိုပွီး ပွနျလုပျကွညျ့တာ ခုတော့ပြောကျ သှားလို့ ရနျကုနျမှာ ခြျောလဲလို့ရတဲ့ ဒဏျရာနာနတောကွောငျ့ခုပွနျလုပျထားပါတယျ…. ခွသေလုံးပုံပါနလေို့ကနျတော့ပါရှငျ….ရှားစောငျး လကျပတျ လကျတဈဝါးစာကို ဆူးတှေ လှီးထုတျပွီး အပွားလိုကျနှဈခွမျးခွမျး လိုကျပါ ….ပွီးရငျမီးနှေးနှေးလေးကငျပါ အပူခံနိုငျသလောကျကငျပွီးရငျ ဒူးခေါငျးပျေါ မှာဖွေးဖွေးခွငျးတငျပါ …..
ပွီးရငျရှားစောငျးလကျပတျပွုတျကမြှာစိုးလို့ ပုံပါအတိုငျး ကွှပျကွှပျအိပျ ကိုအနတေျော ညှပျပွီ အပွငျမှာပွနျကပျထားပါ ….ပွီးရငျ ကွှပျကွှပျကွိုး နဲ့မလြှော့မတငျးစီးပွီးထားပါ သှားစရာမရှိရငျတော့ နလေညျလဲလုပျထားလို့ရပါတယျ ….. ညအိပျရာဝငျလုပျထားရငျ ပိုကောငျးတယျ တဈညလုံး စညျးပွီးအိပျလိုကျ မနကျကတြော့ ပွနျဖွေ နောကျရကျညအိပျရာဝငျတဈခါထပျလုပျ အနာပျေါမူတညျပွီး ပြောကျပါမယျ …..ကမြတော့ ၃ ရကျဆကျလုပျတာနဲ့ခုပြောကျသှားပွီ …. ခုတော့ခြျောလဲထားတဲ့ ဘယျဖကျဒူးကဒဏျကို ပွနျလုပျထားတာပါ ….ခွဖေနောငျ့ နာရငျလဲ ဒီအတိုငျးပဲလုပျ ခုထိပွနျမနာတော့ပါဘူး….. ဒူးနာတဲ့သူတှကေို ကိုယျခွငျးစာလို့ တငျပေးလိုကျတာပါ ….လုပျကွညျ့ကွပါနျော…..
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရဲ့ တင် ရင် တွေကြည့်ပြီး အပျိုစစ်လား မစစ်လား ဝေဖန်နေတဲ့ တစ်ချို့လူတွေ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်သွားပါ
ရကေူးခနျး ထဲ မှာ အလနျးစား ရိုကျ ထား တဲ့ ပုံတှေ တငျပေး လိုကျ တဲ့ မျောဒယျ စတယျလာ